Mampirafy Miady lava Mifamono Saropiaro
Mamaha ny olana i Dr Love Mampirafy ahy izy…Miady lava izahay ao an-trano….Vonoiny aho…Diso saropiaro izy ka tsy sambatra aho….
Ireo no fitarainana betsaka indrindra voarainay eto amin’ny Jejoo amin’ny hafatra miafina isan’andro ka ezahin’i Dr Love valiana. Andro natokana hanamafisana orina ny fifankatiavana ny anio, ho an’ireo manana olon-tiana rehetra ka hanararaotana hamelabelarana ireo totohevitra rehetra hialana amin’ireo olana ireo. Inona àry ny atao mba hahamamy foana ny fitiavana ao an-tokantrano ? Ahoana ny atao mba hampilamina ny fiainan-tokantrano sy hampiredareda foana ny fitiavana ? … Araho ireto hoy i Dr Love.
1. Mahay miady sy mifamela heloka
Tsy misy mpifankatia tsy miady, aleo aloha hekena tsara izay. Na izany aza, dia ilaina fahaizana io miady io eo amin’ny mpifankatia. Mba tsy hiitaran’ny fifamaliana dia tandremana tsara ny fo mba tsy hitroatra amin’ny tsy misy antony. Tenenina mazava izay tsy zaka ary tsy averina resahina ny zava-nisy taloha, fa ilay tranga mampitroatra izao dieny izao ihany no resahana. Tsy manao fiteny, na fihetsika manambany sy mandratra fo. Omena sehatra itenenana ilay olon-tiana, fa tsy ianao ihany no mivazavaza. Rehefa vita ny fitenenanao dia anjaranao indray no mba mihaino. Tsy voatery hitabataba sy hampiaka-peo rahateo, fa azo atao tsara ny miteny amin’ny fomba ara-dalàna. Aleo koa samy haneho ny heviny sy ny fihetseham-pony ny tsirairay, dia mitady marimaritra iraisana avy eo. Ary ny lehibe indrindra tsy azo adinoina dia : aoka hifanaja foana, na samy tezitra aza ! Raha hay ny mandamina haingana ny disadisa sy tsy mampiitatra azy, dia tsy atahorana ho rava ny fiarahana. Ny tena zava-dehibe aorian’ny ady koa mantsy, dia ny fifamelan-keloka, rehefa samy niaiky ny hadisoany sy nandray ny andraikiny avy tao anatin’ilay fifamaliana ny roa tonta.
2. Mahay miala amin’ny fahazarana, mikaroka fiovana foana
Anisan’ny tena fositra mikiky tsikelikely ny fiainam-pitiavana ny fahazarana tafahoatra. Mba hitondrana tsiro hafa ao anaty fiarahana, dia tsara raha mamorona zavatra iaraha-manao tsindraindray ny mpifankatia na dia mahalana aza. Andramo izany ny manokana fotoana iarahana kely, na dia indray mandeha isan-taona aza hanaovana zavatra tsy mahazatra kanefa mahafinaritra toy ny miray ara-nofo any amin’ny toeran-kafa, miara-mijery horonan-tsary, miara-mandamina ny fitoeran’akanjo ka hanesorana ireo akanjony tsy tianao, mivoaka kely miara-misakafo na manao fialamboly mahafinaritra.
3. Mitady hevitra hahatamana an-trano foana
An'ny vehivavy ny tokantrano, ka anjara andraikiny ny mikarakara sy manafana izany. Na izany aza, manana andraikitra ao an-trano koa anefa i ramose. Mba hahatamana azy, araka izany, dia tokony omena ny toerany izy ao an-tokantrano, izany hoe : omena andraikitra mifanandrify aminy sy tiany, ao anatin'ny fanabeazana ny ankizy, amin'ny raharaha... Fantaro koa fa ny tena mahatonga ny lehilahy tsy ho tamana ao an-trano indrindra indrindra, dia ny toetran’ny vehivavy. Ilay mora kizitina sy be menomenona iny no tena itsoahan-dry zalahy, ka tokony atao amin'ny antonony sy lanjalanjaina ihany. Ankoatra izay dia ezaho ihany koa ny hanome izay tiany, araka izay tratran’ny herinao, na eo amin’ny lehilahy na ho an’ny vehivavy. Raha tia mijery baolina, ohatra izy, dia aza bahananao hijerena “série” foana ny fahitalavitra, sao izay no mahatonga azy hilafika any amin'ny namany. Raha tia misotrosotro izy, dia mba avelao hitondra ny namany hiaraka hisotro aminy ao an-trano, na ianao mihitsy no manasà azy ireo, amin'izay ny vadinao tsy ho voasarika hiditra “bar” lava izao. Raha tia manao firaisana ara-nofo izy, dia miezaha hanaraka ny "rythme"-ny, araka izay azo atao, sao izany no hanakana azy tsy hitady vehivavy hafa ampirafesana anao.
4. Mahay mifampikarakara
Mahafinaritra ny olon-tiana sy ny vady foana ihany koa ny mahatsapa fa misy mpikarakara izy ary ianao ilay andefimandriny dia vonona ny hampifaly sy hampisambatra azy. Noho izany, na tsy mitady aza izy dia omeo porofom-pitiavana madinidinika eny foana. Tafiditra ao anatin’izany ny teny mamy sy ny fihetsika mitory fitiavana isan-karazany. Fa isan’izany koa ny fikarakarana amin’ny fiainana andavanandro : mahandro izay sakafo tena ankafiziny, amin’ny fotoana ahafahana manao izany, manomana ny akanjo entiny miasa, manomana praograma kely iarahanareo roa… Rehefa mahatsapa izy fa tianao, dia ho voasarika hamaly fitia ho azy.
5. Mahay mifandray ara-bola
Miteraka ady sy disadisa eo amin’ny mpivady ny olana ara-bola ary mety haharava ny tokantrano mihitsy raha miverimberina matetika. Samy manana ny fomba fifandraisany amin’ny vola tokoa mantsy ny olombelona rehetra. Fara-faharatsiny, misy karazany roa, dia ireo tia mitahiry sy ireo tia mandany. Raha toa ka mifanohitra be io fomba fifandraisanareo amin’ny vola io, dia tena ilaina mihitsy ny mifampiresaka mahakasika izany, mba hitadiavana marimaritra iraisana. Aleo atao mazava in-dray mandeha, amin’izay tsy miverimberina intsony ny olana. Sokafy ny saina fa aza miziriziry hampanjaka foana ny hevitrao satria mety marina koa ny fomba fijeriny. Mialohan’ny handavanao ny hevitry ny vadinao, momba ny fanapahan-kevitra iray ara-bola, dia ezaho fantarina sy azo tsara aloha ireo antony sy tohan-kevitra atolony, sao mba misy fahamarinany ihany. Fantaro fa arakaraky ny mahakely ny fandaniana no mampihena ny ady mikasika ny ara-bola ao an-trano. Mialohan’ny hanaovana fandaniana tsy tena manan-danja koa, dia ny trosa aloha no ezaho ailika faran’izay haingana. Miaraha manapaka ny fandaniana mba ho samy tomponandraikitry ny fandaniana ataony. Misy ihany koa ny tahotra kely sy ny hena-maso, raha toa ka misy anankiray mitady hihoa-pefy.